အွန်လိုင်း4ဓာတ်ပုံ3ဖြတ်တောက်ရန်ကဘယ်လို - အွန်လိုင်းန်ဆောင်မှုများ - 2019
အွန်လိုင်းဓာတ်ပုံကို3×4Create
ပုံစံဓာတ်ပုံများ3×4မကြာခဏစာရွက်စာတမ်းများ processing ဘို့လိုအပ်သည်။ လူကရုပ်ပုံနှင့်ပုံနှိပ်ဓါတ်ပုံကိုအထူးစင်တာ, သွား, သို့မဟုတ်ပါကကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖန်တီးနှင့် software ကနေတစ်ဆင့်အလျောက်။ အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကထိုကဲ့သို့သောဖြစ်စဉ်ကိုအားဖြင့်သွေးဖြစ်ပါတယ်, အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုတည်းဖြတ်ထုတ်သယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကိုထပ်မံဆွေးနွေးကြမည်အရာဖြစ်တယ်။
မကြာခဏထည့်သွင်းစဉ်းစားပုံရဲ့အရွယ်အစားကိုတည်းဖြတ်ဖြင့်၎င်း၏ဖြတ်တောက်မှုအပိုင်းကိုဆိုလိုခြင်းနှင့်တံဆိပ်ခေါင်းများသို့မဟုတ်စာရွက်များအဘို့အထောင့်ဖြည့်စွက်။ ဒီအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အလုပ်အွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များကိုအတူ။ ရဲ့နှစ်ခုလူကြိုက်များက်ဘ်ဆိုက်များ၏သာဓကအားဖြင့်တစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စဉ်ကိုတစ်ဦးပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ကြရအောင်။
Method ကို 1: OFFNOTE
ကျွန်တော်တို့ကို OFFNOTE ဝန်ဆောင်မှုအပေါ် နေ. ကြပါစို့။ ဒါဟာပုံရိပ်တွေအမျိုးမျိုးအတူလုပ်ကိုင်ဘို့များစွာသောအခမဲ့ tools တွေကိုထည့်သွင်း။ ဒါဟာ3×4ချုံ့ခြင်းလိုအပ်ချက်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်သင့်လျော်သည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဤသည်တာဝန်ဖျော်ဖြေနေသည်:
မဆိုအဆင်ပြေ browser ကိုတဆင့်ပွင့်လင်း OFFNOTE နှင့်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ပွင့်လင်းအယ်ဒီတာ"ဘယ်ဟာအဓိကစာမျက်နှာပေါ်တွင်ဖြစ်ပါသည်။
သင်ပထမဦးဆုံးဓာတ်ပုံ upload ဖို့လိုအပ်ရှိရာအယ်ဒီတာအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့သင့်လျော်သော button ကို click လုပ်ပါ။
ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုရွေးချယ်ပါ, ထိုကွန်ပျူတာပေါ်မှာ Pre-သိမ်းဆည်းထား, ထိုသို့ဖွင့်လှစ်။
အခုတော့အလုပ်အခြေခံ parameters များကိုအတူပြုမိသည်။ လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံးအ, ပေါ့ပ်အပ် menu ထဲကသင့်လျော်တဲ့ option ကိုရှာပုံစံကိုဆုံးဖြတ်ရန်။
တခါတရံမှာအရွယ်အစားလိုအပ်ချက်များကိုလုံးဝစံမကျမည်အကြောင်း, ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်ဒီ setting ကို configure ကိုသင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ရိုးရှင်းစွာအသတ်မှတ်ထားသောနယ်ပယ်များတွင်အရေအတွက်ကိုပြောင်းပေးပါ။
ဒါကြောင့်မလိုအပ်လျှင်, တယောလက်နှင့်အတူတစ်ထောင့် Add အဖြစ် Active mode "Black နဲ့အဖြူဓာတ်ပုံကို"လိုချင်သောပစ္စည်းကို ticking အားဖွငျ့ဖွစျသညျ။
အဆိုပါပတ္တူဧရိယာဖို့ရွေးချယ်ရေးရွေ့လျားခြင်းအားဖြင့်, အ preview ကိုပြတင်းပေါက်မှတစ်ဆင့်ရလဒ်များကိုအတိုင်းလိုက်နာ, ဓာတ်ပုံများ၏အနေအထားကိုထိန်းညှိ။
tab ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းအားဖြင့်လာမယ့်ခြေလှမ်းကိုသွားပါ "ထုတ်ယူခြင်း"။ ဒီနေရာတွင်ဓာတ်ပုံ၏ထောင့်တွင်မြေပုံနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်တစ်ဖန်ပြန်လည်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်လိမ့်မည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, တင်းပလိတ်များစာရင်းထဲကသင့်လျော်တဲ့ option ကိုရွေးချယ်ခြင်း, အထီးသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးဝတ်စုံထည့်သွင်းဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။
ချိန်ညှိထိန်းချုပ်ခလုတ်သုံးပြီးအရွယ်အစားနှင့်လည်း Workspace အတွက်အရာဝတ္ထုရွေ့လျားသည်။
အပိုင်းသို့ပြောင်းရန် "ပုံနှိပ်ပါ"အဘယ်မှာရှိတပ်မက်လိုချင်သောအစက္ကူအရွယ်အစားကို tick ။
ဒါဟာသင့်လျော်သောခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်မြေတပြင်လုံးစာရွက်သို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီဓါတ်ပုံကို download လုပ်ပါမှသာဖြစ်နေဆဲပင်။
အဆိုပါပုံရိပ် PNG format နဲ့သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာသိမ်းဆည်းထားနဲ့နောက်ထပ်အပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့ရှိပုံ၏ပြင်ဆင်မှုအတွက်ရှုပ်ထွေးဘာမျှမက built-အပေါ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာကို အသုံးပြု. လိုချင်သော setting များကိုလျှောက်ထားရန်သာဖြစ်နေဆဲပင်။
Method ကို 2: IDphoto
Tools များနှင့်အခွင့်အလမ်းများကို IDphoto site ကိုယခင်ကဖော်ပြထားရှိသူများအနေဖြင့်အများကြီးကွဲပြားခြားနားသောသည်မဟုတ်, အချို့သောအခြေအနေများတွင်အသုံးဝင်နိုင် features တွေရှိပါတယ်။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့ကိုအောက်တွင်တင်ဆက်ဓာတ်ပုံများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်များ၏ဖြစ်စဉ်ကိုစဉ်းစားရန်အကြံပြုပါသည်။
အိမ်စာမကျြနှာသို့သွားပါ, ဘယ်မှာပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ "ကြိုးစားပါ".
drop-down list ကိုအသုံးပြုခြင်း, image ကို format ကိုသတ်မှတ်။
အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အပ်လုဒ်ဖိုင်" အဆိုပါ site ကိုမှဓာတ်ပုံများ upload တင်ပေးရန်။
သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ပုံရိပ်ကို Locate ကဖွင့်လှစ်။
အဆိုပါမှတ်သားလိုင်းများနှင့်အတူဒါကြောင့်မျက်နှာနှင့်ကျန်ရှိသောအစိတ်အပိုင်းများကိုတသမတ်တည်းင်း၏ရပ်တည်ချက်ကို Adjust ။ အကြေးခွံများနှင့်အခြားအသွင်ပြောင်းလက်ဝဲဘက် panel ကိုအပေါ် tools များမှတဆင့်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
Display ရဲ့ချိန်ညှိသွား "Next ကို".
နောက်ခံဖယ်ရှားပစ်ရန် tool ကိုဖွင့်ပါ - ဒါကြောင့်အဖြူပေါ်တွင်မလိုချင်တဲ့အစိတ်အပိုင်းများအစားထိုးထားသည်။ ဒီ tool ပြောင်းလဲမှုလက်ဝဲ panel ကိုဧရိယာထဲမှာ။
သင့်ကိုယ်ပိုင်၏အရောင်အဝါများနှင့်ဆနျ့ကငျြဘ Adjust နှင့်ပေါ်ရွှေ့။
ဓာတ်ပုံကိုသင်သတ်မှတ်ထားသောခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်အခမဲ့သင့်ကွန်ပျူတာသို့ Download ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်, အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင် layout ကိုဒီဇိုင်းနှစ်ခုဗားရှင်းအတွက်စာရွက်ပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်ဓာတ်ပုံများဖြစ်ပါတယ်။ သင့်လျော်သောအမှတ်အသား mark ။
သင်ပုံရိပ်နှင့်အတူပြီးဆုံးပါပြီအခါ, သငျသညျအထူးပုံနှိပ်ကိရိယာများမှာလိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုသင်အောက်ပါ link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ငါတို့ကတခြားဆောင်းပါး, ကူညီကြမည်ကိုနားလည်သဘောပေါက်။
အသေးစိတ်: ပရင့်ထုတ်ရန်ဓါတ်ပုံ3×4ပရင်တာပေါ်
ကျနော်တို့လုပ်ရပ်တွေကဖန်တီးဆုံးနှင့်3×4တိုင်းတာခြင်းဓာတ်ပုံတွေယခင်ကသီးနှံစိုက်ပျိုး၌သင်တို့ကိုဆုံးအထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဝန်ဆောင်မှုရွေးချယ်မှု facilitated ရှိသည်ဟုဖော်ပြထားပါပြီမျှော်လင့်ပါတယ်။ အင်တာနက်ကိုတွင်ထိုအရပ်၌များစွာသောဤကဲ့သို့သောအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဒါအကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်မခက်ခဲသည်ကိုရှာဖွေရန်, တဦးတည်းနှင့်အတူတူပင်နိယာမနှင့် ပတ်သက်. အလုပ်လုပ်ကိုင်, က်ဘ်ဆိုက်များပေးဆောင်။